သူမဈေးရောင်းခါစတုန်းက ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဆင်မပြေမှုတစ်ချို့နဲ့အခက်အခဲတွေကို ပြောလာခဲ့တဲ့ ပိုးအိအိခန့် – Cele Snap
သူမဈေးရောင်းခါစတုန်းက ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဆင်မပြေမှုတစ်ချို့နဲ့အခက်အခဲတွေကို ပြောလာခဲ့တဲ့ ပိုးအိအိခန့်
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ပိုးအိအိခန့် ကတော့ သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူ ဘန်ကောက်မြို့တွင် အခြေချနေထိုင် နေပါတယ်နော်။ ဘန်ကောက်ကို မပြောင်းရွေ့မီ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခဲ့စဉ်အတွင်းမှာ အထည်တွေ ရောင်းချခြင်းဖြင့် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ စီးပွားရှာခဲ့ပါတယ်နော်။ အနေအေးတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် သူ့ကိုစော်ကားလာရင်တော့ လုံးဝသည်းမခံဘဲ ပြန်ဖြေရှင်းတတ်သူ တစ်ယောက် ပါနော်။
ဈေးရောင်း ခဲ့စဉ်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရဖြစ်စဉ်လေး တွေကို ပိုးအိအိခန့်မှ ပြန်ပြီး ရေးသားပြောပြလာ ခဲ့ပါတယ်နော်။ ” “အမှားထဲက နောင်တ”တကယ်တော့ လူနှစ်ယောက် ပြဿနာတက် အချင်းများတယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲ ကိုယ်ကြည့်ပြီး သူ့ဘက်သူ့နေရာကို ဝင်မကြည့်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ စကားများတတ် ပါတယ်ပြောရမယ်ဆို ကိုယ့်ဘက်က ကြည့် လက်ဖမိုး သူ့ဘက်ကကြည့် လက်ဖဝါး ဆိုသလိုပေါ့ကျွန်မ live sale တွေ စရောင်းစဉ်အခါကပေါ့ ကျွန်မ customer တစ်ဦးနဲ့ စကားလေးအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် (စာရိုက်ပြီးပဲဖြစ်တာပါ)ကျွန်မ အကျင့်က ကိစ္စတစ်ခု ရှိပြီဆို ဒီအလုပ်ကိစ္စကို ပြီးပြတ်အောင်လုပ်ပြီးမှ စားဝင်အိပ်ပျော်တယ် စာကျက်ရင်လည်း တစ်ပုဒ်လုံးရမှ အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တုန်းကလည်း ကျွန်မ က တစ်နေ့ ရောင်းလို့ရသမျှ အော်ဒါတွေ အကုန်ကို တစ်ညထဲနဲ့ အပြီးသတ် စာရင်း လုပ်ချင်တယ် ညစာရင်းလုပ် မနက်ကို အော်ဒါ တင်တာတင် deli အပ်စရာရှိတာအပ်ပေါ့အော်ဒါတွေက အရမ်းများ လူကလည်း စလုပ်ခါစကလည်းဖြစ်တော့ ညတွေ မအိပ် မနက်လင်းအားကြီး ၄ / ၅ နာရီလောက်မှ အိပ် မနက်ဆို နေ့လည် ၁၂ လောက်မှ ထ အဲ့လိုမျိုး လုပ်ခဲ့တာပေါ့တစ်ရက်ကျတော့ customer တစ်ဦးက ကျွန်မဆီက အထည်တွေ အများကြီးအားပေးတယ် သောင်းဂဏန်းရောင်းတဲ့အထည်ကို သိန်းချီဖိုးအားပေး တယ်…..
အဲ့တော့ သူငွေကြိုလွှဲဖို့လိုရော လိုတော့ သူက မနက်စောစော ငွေ လွှဲလိုက်တယ် ထင်ပါတယ် ကျွန်မကို ဖုန်းတွေ ဆက်ပါ လေရော…. မကိုင်မချင်းဆက်တာ …… ကျွန်မ အကျင့်ကလည်း လိုင်းမပိတ်တဲ့အကျင့်(ခုတော့လိုင်းပိတ်အိပ်နေပြီ😄)ဖုန်းကို ခေါင်းနားထားအိပ်တဲ့အကျင့်(ထားတုန်းပဲ ဖုန်းတော့😛)သူက တဂွမ်ဂွမ်ဆက် ကိုယ်က ညက မအိပ် မိုးလင်းမှ အိပ်ရ နဲ့ ဆက်တိုက် ဆက်တိုက် ဆက်ပါများတော့(မနက်၈နာရီလောက်ကနေ ၁၁ နာရီလောက်ထိ) မအိပ်ရတဲ့စိတ်နဲ့ တဒင်္ဂ ဒေါသက စပါလေရော ဖုန်းကိုင်ပြီး ဘယ်သူဒီလောက်ဆက်နေလဲ ကြည့်တော့ ငွေလွှဲထားတာ ဝင်လား စစ်ပေးပါတဲ့ 😩ကျွန်မလည်း လူကပုတော့ စိတ်ကလည်းသိတယ်မလား 😖အမရယ်လို့ ကျွန်မက blue mark ကြီးနဲ့ ရောင်းနေတာပါလို့ အမငွေ ကို ကျွန်မ လိုင်းသုံးတာနဲ့စစ်ပြီး အကြောင်းပြန်ထားမှာပေါ့လို့တစ်ဖက်ကလည်း ကျွန်မကလည်း ကျွန်မငွေလွှဲထားတာလေတဲ့ ဝင်မဝင် သိချင်တယ်တဲ့ စသဖြင့် အနည်းငယ်လောက် စကားလေးတွေ အဆင်မပြေ့တပြေပြောကြတယ် နောက်ဆုံး customer right မို့ ကျွန်မကပဲ စကားလုံးလေးတွေ ချိုတဲ့ဘက်ပြောင်းပြီး ရပ်လိုက်ရတယ်တကယ့်တကယ် ပြန် စဉ်းစားကြည့်တော့ သူမှန်တယ် ။
ကျွန်မ ညမအိပ် ဘဲ အလုပ်လုပ်နေတာ သူမသိဘူး သူ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး သူ့ကိစ္စက သူ့ငွေ သူတန်ဖိုးထားတဲ့ ငွေကို ဘာပစ္စည်းမှ လက်မခံရသေးဘဲ ကြိုလွှဲရတာ ဝင်ကြောင်း သက်သေ လိုချင်တယ် ဖြစ်သင့်တယ် ကိုယ့်အတွက် ၁ သိန်း ၂ သိန်းက တန်ဖိုးရှိချင်လည်းရှိမယ် ရှိချင်မှလည်းရှိမယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ဖက်လူအတွက်တန်ဖိုး အရမ်းရှိနေနိုင်တယ်ဒါကို တစ်ဖက်လူရဲ့နေရာကို မကြည့်ဘဲ ငါညကမအိပ်ရဘူး မနက်မှ အိပ်ရတာကို ဘာလို့ဒီလောက်ဖုန်းဆက်နေတာလဲ မသိဘူးနဲ့ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ကြည့်ပြီး တဒင်္ဂ စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်မိခဲ့တာ ပြန်တွေးကြည့်တော့ ကျွန်မ မှားတယ်နောက်နောင်လည်း အမြဲ သူ့ဖက် ကိုယ့်ဖက် ကြည့်ပြီး တဒင်္ဂ ဒေါသကို မထွက်ဘဲ နေနိုင်အောင် သတိထားရမယ်အဲ့တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့အမ ဘယ်သူလည်းတော့ မမှတ်မိတော့ပေမယ့် အမက ဒီစာလေးဖတ်မိလို့ မှတ်မိရင် ညီမကပဲတောင်းပန်ပါတယ် နော် ☺️☺️☺️Peace နော်အမနောက်ဈေးရောင်းလည်း အားပေးနော်ဘာရောင်းရမလဲတော့ မသိသေးဘူး 😂P.S ပုံက မျက်နှာငယ်လေး နဲ့တောင်းပန်နေတာပေါ့ 😔😜” လို့ ရေးထားပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါ တယ်နော်။
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ ပိုးအိအိခနျ့ ကတော့ သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူ ဘနျကောကျမွို့တှငျ အခွခေနြထေိုငျ နပေါတယျနျော။ ဘနျကောကျကို မပွောငျးရှမေီ့ မွနျမာနိုငျငံတှငျ နထေိုငျခဲ့စဉျအတှငျးမှာ အထညျတှေ ရောငျးခခြွငျးဖွငျ့ တဈဖကျတဈလမျးကနေ စီးပှားရှာခဲ့ပါတယျနျော။ အနအေေးတယျလို့ ထငျရပမေယျ့ သူ့ကိုစျောကားလာရငျတော့ လုံးဝသညျးမခံဘဲ ပွနျဖွရှေငျးတတျသူတဈယောကျပါ နျော။
ဈေးရောငျး ခဲ့စဉျက ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ အမှတျတရဖွဈစဉျလေး တှကေို ပိုးအိအိခနျ့မှ ပွနျပွီး ရေးသားပွောပွလာ ခဲ့ပါတယျနျော။ ” “အမှားထဲက နောငျတ”တကယျတော့ လူနှဈယောကျ ပွဿနာတကျ အခငျြးမြားတယျဆိုတာက ကိုယျ့ဘကျကိုပဲ ကိုယျကွညျ့ပွီး သူ့ဘကျသူ့နရောကို ဝငျမကွညျ့တဲ့ အခါမြိုးတှမှော စကားမြားတတျ ပါတယျပွောရမယျဆို ကိုယျ့ဘကျက ကွညျ့ လကျဖမိုး သူ့ဘကျကကွညျ့ လကျဖဝါး ဆိုသလိုပေါ့ကြှနျမ live sale တှေ စရောငျးစဉျအခါကပေါ့ ကြှနျမ customer တဈဦးနဲ့ စကားလေးအဆငျမပွဖွေဈခဲ့ဖူးတယျ (စာရိုကျပွီးပဲဖွဈတာပါ)ကြှနျမ အကငျြ့က ကိစ်စတဈခု ရှိပွီဆို ဒီအလုပျကိစ်စကို ပွီးပွတျအောငျလုပျပွီးမှ စားဝငျအိပျပြျောတယျ စာကကျြရငျလညျး တဈပုဒျလုံးရမှ အဲ့လိုမြိုးပေါ့အဲ့တုနျးကလညျး ကြှနျမ က တဈနေ့ ရောငျးလို့ရသမြှ အျောဒါတှေ အကုနျကို တဈညထဲနဲ့ အပွီးသတျ စာရငျး လုပျခငျြတယျ ညစာရငျးလုပျ မနကျကို အျောဒါ တငျတာတငျ deli အပျစရာရှိတာအပျပေါ့အျောဒါတှကေ အရမျးမြား လူကလညျး စလုပျခါစကလညျးဖွဈတော့ ညတှေ မအိပျ မနကျလငျးအားကွီး ၄ / ၅ နာရီလောကျမှ အိပျ မနကျဆို နလေ့ညျ ၁၂ လောကျမှ ထ အဲ့လိုမြိုး လုပျခဲ့တာပေါ့တဈရကျကတြော့ customer တဈဦးက ကြှနျမဆီက အထညျတှေ အမြားကွီးအားပေးတယျ သောငျးဂဏနျးရောငျးတဲ့အထညျကို သိနျးခြီဖိုးအားပေးတယျ…..
အဲ့တော့ သူငှကွေိုလှဲဖို့လိုရော လိုတော့ သူက မနကျစောစော ငှေ လှဲလိုကျတယျ ထငျပါတယျ ကြှနျမကို ဖုနျးတှေ ဆကျပါ လရေော…. မကိုငျမခငျြးဆကျတာ …… ကြှနျမ အကငျြ့ကလညျး လိုငျးမပိတျတဲ့အကငျြ့(ခုတော့လိုငျးပိတျအိပျနပွေီ😄)ဖုနျးကို ခေါငျးနားထားအိပျတဲ့အကငျြ့(ထားတုနျးပဲ ဖုနျးတော့😛)သူက တဂှမျဂှမျဆကျ ကိုယျက ညက မအိပျ မိုးလငျးမှ အိပျရ နဲ့ ဆကျတိုကျ ဆကျတိုကျ ဆကျပါမြားတော့(မနကျ၈နာရီလောကျကနေ ၁၁ နာရီလောကျထိ) မအိပျရတဲ့စိတျနဲ့ တဒင်ျဂ ဒေါသက စပါလရေော ဖုနျးကိုငျပွီး ဘယျသူဒီလောကျဆကျနလေဲ ကွညျ့တော့ ငှလှေဲထားတာ ဝငျလား စဈပေးပါတဲ့ 😩ကြှနျမလညျး လူကပုတော့ စိတျကလညျးသိတယျမလား 😖အမရယျလို့ ကြှနျမက blue mark ကွီးနဲ့ ရောငျးနတောပါလို့ အမငှေ ကို ကြှနျမ လိုငျးသုံးတာနဲ့စဈပွီး အကွောငျးပွနျထားမှာပေါ့လို့တဈဖကျကလညျး ကြှနျမကလညျး ကြှနျမငှလှေဲထားတာလတေဲ့ ဝငျမဝငျ သိခငျြတယျတဲ့ စသဖွငျ့ အနညျးငယျလောကျ စကားလေးတှေ အဆငျမပွတေ့ပွပွေောကွတယျ နောကျဆုံး customer right မို့ ကြှနျမကပဲ စကားလုံးလေးတှေ ခြိုတဲ့ဘကျပွောငျးပွီး ရပျလိုကျရတယျတကယျ့တကယျ ပွနျစဉျးစားကွညျ့တော့ သူမှနျတယျ ။
ကြှနျမ ညမအိပျ ဘဲ အလုပျလုပျနတော သူမသိဘူး သူ့ကိစ်စလညျးမဟုတျဘူး သူ့ကိစ်စက သူ့ငှေ သူတနျဖိုးထားတဲ့ ငှကေို ဘာပစ်စညျးမှ လကျမခံရသေးဘဲ ကွိုလှဲရတာ ဝငျကွောငျး သကျသေ လိုခငျြတယျ ဖွဈသငျ့တယျ ကိုယျ့အတှကျ ၁ သိနျး ၂ သိနျးက တနျဖိုးရှိခငျြလညျးရှိမယျ ရှိခငျြမှလညျးရှိမယျဆိုပမေယျ့ တဈဖကျလူအတှကျတနျဖိုး အရမျးရှိနနေိုငျတယျဒါကို တဈဖကျလူရဲ့နရောကို မကွညျ့ဘဲ ငါညကမအိပျရဘူး မနကျမှ အိပျရတာကို ဘာလို့ဒီလောကျဖုနျးဆကျနတောလဲ မသိဘူးနဲ့ ကိုယျ့အတှကျ ကိုယျကွညျ့ပွီး တဒင်ျဂ စိတျနဲ့တုံ့ပွနျမိခဲ့တာ ပွနျတှေးကွညျ့တော့ ကြှနျမ မှားတယျနောကျနောငျလညျး အမွဲ သူ့ဖကျ ကိုယျ့ဖကျ ကွညျ့ပွီး တဒင်ျဂ ဒေါသကို မထှကျဘဲ နနေိုငျအောငျ သတိထားရမယျအဲ့တုနျးက ဖွဈခဲ့တဲ့အမ ဘယျသူလညျးတော့ မမှတျမိတော့ပမေယျ့ အမက ဒီစာလေးဖတျမိလို့ မှတျမိရငျ ညီမကပဲတောငျးပနျပါတယျ နျော ☺️☺️☺️Peace နျောအမနောကျစြေးရောငျးလညျး အားပေးနျောဘာရောငျးရမလဲတော့ မသိသေးဘူး 😂P.S ပုံက မကျြနှာငယျလေးနဲ့တောငျးပနျနတောပေါ့ 😔😜” လို့ ရေးထားပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ…။ဖတျရှုပေးတဲ့ပရိသတျကွီးကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျပါတယျနျော။
သူမကို နှမချင်းမစာမနာပြောခဲ့တဲ့ နှစ်ယောက်တွင် တစ်ယောက်မှ ပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့တာကြောင့် ကျေအေးပေးလိုက်ကြောင်းပြောပြခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
အနုပညာလုပ်ငန်းတွေရပ်နားထားရလို့ ၀င်ငွေနည်းပေမယ့်လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိက္ခာလုံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး